तपाईं मृगौलामा भएको पत्थरी हटाउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए खानुहोस् यी ५ खानेकुराहरु, मानिन्छ अमृत समान!!! – News Nepali Dainik
तपाईं मृगौलामा भएको पत्थरी हटाउन चाहानुहुन्छ ? उसोभए खानुहोस् यी ५ खानेकुराहरु, मानिन्छ अमृत समान!!!
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: १३:२६:३५
हामीकहाँ मृगौलाको पत्थरीका विरामीको कमी छैन्, झन झन बढ्दै गएका छन् । पत्थरीको आकार केही साना हुन्छन् भने केही ठूला । सानो खालको पत्थरीलाई प्राकृतिक उपायमार्फत पिसाबबाट पनि निकाल्न सकिन्छ ।
हामी यस्ता खानेकुराकोबारे वर्णन गर्दैछौँ जसले पत्थरीबाट बचाउँछ ।
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 1:26 pm